MCplaces Apt.1 - I-Airbnb
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uAndreas iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Iiflethi ezintsha eziqaqambileyo nezihonjisiweyo zanamhlanje zilungele izibini, iintsapho ezinabantwana kunye nabahlobo. Zibekwe kwindawo efanelekileyo kwenye yezona ndawo zidumileyo zeKato Paphos, iimitha ezingama-200 ukusuka echwebeni, kunye nesitrato esikhulu esinemivalo kunye neeresityu. Isikhululo sebhasi sikumgama nje weemitha ezingama-30 kwaye indawo enkulu yeevenkile ikumgama nje weemitha ezingama-200. La magumbi akweyona ndawo ilungileyo yokutyelela zonke iindawo ezibalulekileyo zePafos kunye neevenkile kunye neelwandle, kodwa ziselumelwaneni!
Le flethi yenye yezine ezikhoyo kwisakhiwo se-MCPlaces ezifumanekayo zokurentisa ngeeholide. Esi sisitudiyo esiphangaleleyo, esihonjiswe ngoku, ibhedi etofotofo kunye neelinen zokulala kweyona ndawo ibalaseleyo yaseKato Pafos. Eli gumbi le studio linebhedi enye yesofa kwigumbi lokuhlala kunye neseti yokutyela. Inebalcony enkulu eneebhedi zelanga kunye neseti etofotofo yangaphandle yokuhlala. I-balcony ijikelezwe ngocingo olumhlophe lwamaplanga ukwenzela ukuba ubucala bakho. Zonke iiflethi zineeTV ezihlakaniphile eziqhagamshelwe kwiYouTube, okanye iiakhawunti zenethiwekhi ezifana neNetflix (ungaqhagamshela kwiakhawunti yakho yeNetflix). Zonke iimpahla ezimhlophe zibandakanyiwe kunye nomenzi wekofu, i-toaster kunye neketile yombane. Ulwandle luziimitha ezingama-200 ukusuka kwipropati, kunye nesikhululo sebhasi esiphakathi. Indawo yokubhaka ibekwe ngqo macala onke amagumbi. Ungafikelela kwikhemesti kumgama ozimitha ezingama-50 ukusuka kwipropati. Onke amagumbi makhulu kakhulu (70-80 m2) kwaye onke akumgangatho ophantsi.
Indawo yokuhlala enabantu abaninzi basekhaya, enezindlu zesitayile esidala njengoko le yayikade iyilali yabalobi. Kwiminyaka yoo-1950 uninzi lwabantu ababehlala apho yayingabalobi beentlanzi kwaye babedla ngokuhlala phandle phantsi komthunzi wemithi batye, basele kwaye bancokole. Iindawo ezibaluleke kakhulu zakudala zePafos zikumgama wokuhamba ukusuka kwindlu. I-Odeon yaMandulo, i-Agia Solomoni Catacomb, i-Saranta kolones, i-Castle enkulu kunye nepaki ye-Archaeological park yimizuzu embalwa nje.
Umnini uyafumaneka ngemibuzo , iingcebiso malunga neendawo zokutyela, kunye neengcebiso malunga neendawo ezinokuthi zindwendwelwe ziindwendwe.